कुमारी बैंक : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, २१ जेठ २०७८)
बिहीवार बैंकको शेयर मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ३ दशमलव ८३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रु. ३५२ पुगेको हो । बिहीवार बजार बढेसँगै अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूको शेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ ।
चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्म बैंकको वितरणयोग्य नाफा रु. ९८ करोड ४६ लाख ४९ हजार रहेको छ । बैंकले सो अवधिमा आर्जन गरेको खुद नाफाबाट एनएफआरएस प्रणालीअनुसार विभिन्न शीर्षकमा छुट्याएपछिको नाफा नै वितरणयोग्य नाफा हो । यही नाफाबाट बैंकले शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने गर्दछ ।
बैंकले चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्म रु. १ अर्ब ८० करोड ८४ लाख नाफा कमाएको हो । सो अवधिमा बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी रु. १७ दशमलव ३७ रहेको छ । बैंकले अघिल्लो आवको मुनाफाबाट शेयरधनीलाई १० दशमलव ८५ प्रतिशत बोनस शेयर र ३ दशमलव १५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको हो ।
कम्पनीको ५९ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा लामो टुप्पी भएको सेतो लामो शरीरको मैनबत्ती बनेको छ । यस्तो मैनबत्तीले बजारमा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको संकेत गर्छ । आरएसआई ओभरबौज्ट जोन ७१ दशमलव ४५ बिन्दुमा छ ।
यसले शेयर खरिद चाप उच्च रहेको देखाउँछ । कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ५ दशमलव शून्य ८ बिन्दुमा छ । उतारचढाव न्यून रहेको देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा जोखिम मध्यम हुन्छ भने प्रतिफल पनि मध्यम हुने गर्दछ ।
बिहीवारको शेयर मूल्य रु. ३५२ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य सस्तिए रु. ३३८ मा टेवा पाउने देखिन्छ । यो दिनको मूल्य ५९ कारोबार दिनयताकै उच्च कायम रहेको छ ।